SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 27aad oo xiiso leh. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 27aad oo xiiso leh.
Waxaan ka cudur daaranayaa hakadkii sheekada xalay ku yimid maadaama xaalad mashquul badan aan galay.
Sheekada waxay qeybtii hore noo mareysay markii ay gabdhii marqaatiyaashii u wacday.
Markaas ayay sheikh iyo marqaati u wacday markii ay isku imaadeeana waxay ku dhahday “marqaati ka ahaada in wiilkaan aan meher ahaan uga qaatay 20kaas diinaar guurkiisana aan rabo waxaana ka marag kacayaa in maalkeyga oo dhan iyo dhamaan adoomadeyda iyo jaariyadaheyga aan wiilkaan ku wareejiyay midaas marqaati iiga ahaada”
Markaas ayaa gabadhii la igu mehriyay kadibna inta isoo waday ayay isoo hor istaajisay sanduuq weyn weyna furtay waxaana kasoo baxay mandiilyaal badan oo ahaa kuwii aan lacagta ugu keeni jiray kaawaasoo sidoodii ah lacagtiina ku jirto.
Markaas ayaa waxay igu tiri “kani waa maalkaagii aan kaa qaadan jiray waxaana maalinkasta ku ridi jiray sanduuqaan ee wado qaado alle dib ayuu kuugu soo celiyee wixii kugu dhacayna waxay ahaayeen qadarta rabi anigana ma owoodo inaan abaalkaaga gudo xitaa hadii aan naftayda kuu hibeeyo”.
Markaas ayay hantideedi oo dhan igu soo wareejisay anigana waan ka aqbalay waxayna ahayd mid aad iiga murugaysan waxaana sii wada noolaanay muddo bil ah haseyeeshee murugtii ayaa kusii xoogaysatay weyna jiratay ayadoo aad u xanuunsatay mana kasoo wareegan konto beri illaa ay ka geeriyootay.
Waxaan dareemay murug iyo walbahaar daran meydkeedii ayaan soo duugay anigoo hanti fara badan u sadaqeeyay.
Kadib markii xaaskaygii ay dhimatay waxaan ogaaday inay hanti faro badan iiga tagtay oo ay qayb ka yihiin badeecadi aan halkaan u iib keenay tanina waa sababtii aan gacantayda bidix wax ugu cunaayo markaas ayuu wuxuu iga codsaday inaan masar u raaco anigana waan ka ogolaaday waxaana isku raacnay dhulka masar ilaa aan halkaan uga soo wareegtay oo aan ninkaan weershaha maydka aan kala kulmay.
Markaas ayuu suldaankii yiri “dhamaantiina waan la idin daldalayaa”.
Markaas ayay shaharzaad ogaatay in subixii lagaaray waxayna joojisay hadalkii u banaanaa.
Habeenkii xigay waxay tiri waxaa isoo gaartay boqoroow in suldaankii shiinaha markuu yiri waan idin wada daldalayaa ayaa waxaa hadlay muslimkii wuxuuna yiri hadii aad ii fasaxdo waxaan kuu sheegi karaa sheeko I qabsatay intaan weershahaan la kulmin kahor hadii sheekadaas ka fiicnaato mida hada taagan ma ogoshahay inaad ruuxdeena noo hibayaso markaas ayuu suldaankii ku jawaabay “soodaa waxaad hayso”.
Muslimkii wuxuu hadal ku bilowday waxaad ogaataa suldaanoow in habeen hore aan la joogay koox wax khatimaysay waxayna isugu yeereen culimo markii wixii la akhrinaayay la akhriyay ayay noo keeneen cunto waxaana cuntadaas ka mid ahaay cuntada loo yaqaano zurbaaja markaasaan waxaan gudo galnay inaan cunno.
Hase yeeshee mid naga mida ayaa diiday inuu cuntada zurbaaja cuno waxaana waydiinay sababta wuxuuna noogu jawaabay anoon afartan jeer gacantayda dhaqin ma cunaayi markaas ayaan farodhaqii u keennay.
Markii uu farxashay oo uu cuntadii gacanta usoo taagay waxaan ogaannay inuu afar farood bes leeyahay wax suul ahna uusan ku oollin markaas ayaan waydiinay maxaa suulka kaaga dhacay wuxuu noogu jawaabay suulka gacanta midig kaliya ma li’i ee dhamaan suulasha ayaan la’ahay xitaa kuwa lugaha.
Markaas ayaan la yaabnay hadalkiisa waxaana weydiinay “war ninyahow maxay tahay qisadaada iyo suul la’aanta aad tahay?”
Wuxuu noogu jawaabay; aniga aabaheyga wuxuu kamid ahaa tujaarta ugu hantida badan magaalada lkn wuxuu lahaa caado xun taasoo ah inuu khamri cab ahaa, maalintii dambe ayuu aabaheyga geeriyooday waan soo duugay lkn markii dambe waxaan ogaaday inuusan wax hanti ah nooga tagin.
Aad ayaan uga murugooday dhimashadiisa waxaana tacsidiisa u fadhinay maalmo ilaa maalintii dambe aan furay tukaankii uu lahaa, wuxuuna ahaa mid haawanaya misna deymo badan lagu leeyahay.
Markaas ayaan tukaankii boorka ka jafay ganacsi yarna meesha ka bilaabay si aan deymaha aabahey lagu leeyahay u bixiyo, wixii aan shaqeeyaba habeen iyo maalin soo taagnaadaba ugu dambeyn waxaan ku guuleystay inaan deymihii bixiyo nafteydana uga ganacsado.
Maalintii dambe anigoo tukaankii iska dhex joogo oo ganacsigeygii iska wato ayaan waxaan arkay gabar aad u qurux badan taasoo aan mid lamid ah horay u arkin, waxay wadatay waxkasta oo la isku qurxiyo ayadoo baqal saarneyd.
Gabadha waxaa hor socday adoon sidoo kalana gadaasheeda waxaa socday adoon kale, baqashii ayaa waxay istaajisay suuqa bartankiisa weyna soo dagatay.
Markaas ayay tukaamadii suuqa isha lawada raacday waxayna ogaatay in tukaankeyga ugu fiicanyahay badeecada taalo owgeed, markaas ayay dhankeyga u soo jiheysatay oo tukaankeyga soo aaday.
Markii ay tukaanka soo gashay ayay I salaamtay markaas ayaan dareemay quruxda codkeeda, waxayna iska furtay xijaabkii ay wadatay yaa Allaah alla maxay qurux badantahay waxaadba moodaa xuurulceyntii janada oo I hor taagan.
Markaas ayay badeecadii ay rabtay I weydiisay ana waxaan u sheegay in badeecadaas hada ii oolin balse ay xoogaa yar sugto inta bakhaarada laga furaayo.
Markaas ayay fariisatay anaga oo halkii sheeko qabsanay inta bakhaarada laga furaayo, waxaana markii dambe la furay bakhaaradii waana u keenay badeecadii ay rabtay taasoo dhameyd qiimo ahaan 5,000 oo dirham.
Markii aan badeecadii u keenay ayay kacday iyadoon wax lacag ah dhiibin waxayna fuushay baqasheedii anigana juuq ma aanan dhihi waayo markaas waxa kaliya ee aan ka fakaraayay ayaa waxay aheyd quruxda eebe uu ku maneystay.
Gabadhii wey baxday ma weydiinin halka ay dagantahay ma weydiinin lacagtii mana aqaano meel ay ka timid intaas dhan waxaa iiga sii daran qalbigeyga qofaan ayada aheynba kama fakaraayo.
Isbuuc ayaa kasoo wareegatay gabadhiina ma hayo waxaana ii yimid ganacsatadii oo lacagtoodii raadinaayo waxaanse usheegay iney ilaa isbuuc kale I sugaan.
Isbuucii xigay nasiib wanaag wey imaaday iyadoo oo lacagtii sida markii aan lacagtii ka qaatay ayay su’aal lama filaan ah oo aan markaas sinaba u fileynin I weydiisay iyadoo I dhahday……
La soco qeybta 28aad habeen dambe xiligaan oo kale.
Hadii aadan aqrisanin Sheekada KUN HABEEN IYO HABEEN hordhaceeda fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 9-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 10-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 11-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 12-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 13-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 14-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 15-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 16-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 17-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 18-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 19-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 20-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 21-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 22-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 23-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 24-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 25-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Hadii aadan aqrisanin Sheekada Qaybteedii 26-aad Fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 1,125
Ka Dib Markii Sanjay Leela Bhansali Filimkiisa Xiga Ee Inshallah uu Atariisho Kaga Dhigay Alia Bhatt Aan Isla Ogaano Atariishooyinka Hogaamiye Ka Ahaayeen Aflaamtiisa Hore March 19, 2019
Tani Waa Atariishada Ugu Awoodda Badan Dalka India : Alia Bhatt Oo Labo Sano Gudahood Ku Samayn Doonta 7 Filim Ugu Weyn Dalka India Iyadoo La Shaqayn Doona Ranbir Kapoor Iyo Ram Charan March 19, 2019
News of the Year: Salman Khan Iyo Alia Bhatt Oo Maanta Si Weyn U Haystaa Baraha Bulshada Ka Dib Markii Lagu Dhawaaqay Inay Ku Midoobayn Sanjay Leela Bhansali Filimkiisa Xiga Ee Inshallah March 19, 2019
Rasmi Heeskii Lawada Sugaayey Main Taare Ee Salman Khan Ku Luuqeyay Ayaa Laga Soo Bandhigay Filmka Notebook (+Video) March 19, 2019
Salman Dagaal Muu Diyaar U Yahay 2020 Mise Maalin Aan Fasax Jirin Ayuu Imaan Doonaa March 19, 2019
53-jir (Salman) Inuu Jaceyl La Wadaago 26-jir (Alia) Suura Gal Ma Tahay Filimka Inshallah March 19, 2019
Mouni Roy Oo Wiilashada Baraha Bulshada Mashquulisay Iyo Sawiradeeda Shidan Ee Indhaha Laga Qaadi Karin!! March 19, 2019